Wholesale Budget 5x10m PE Chiitiko Party Tende uye Greenhouse | Kukunda
10-29 Zvimedu 30-49 Zvidimbu > = 50 Zvidimbu
Model Nhamba WS-P1510
Item zita Budget 5x10m PE Chiitiko Party Tende
Kukura kwechigadzirwa 16x32ft (5x10m)
Chakafukidza zvinhu 180gsm Pe
Masvingo emadziro 160gsm PE
16x32ft (5x10m) Dhizaini Yakajairwa
Kuishandisa pane yako inotevera pati, muchato kana BBQ kushandura chero marongero kuita yakasarudzika chiitiko! Shandura kuungana kwakajairika kuve kunoshamisa neinofadza uye inoshanda tende repati.
Iyo yakasimba, isina mvura-PE machira edenga uye masvingo emadziro anotendera kuti ive nyore kuchenesa uye chengetedza yakaoma mamiriro ekunze.
Iyo wavy Edge dhizaini inokupa iwe imwe sarudzo. Kuvhara kwakapoteredzwa kwakatenderedzawallwall kunoita kuti tende isapinda uye igare yakachengeteka, ichishandisa zvidhinha, bhegi rejecha kana zvimwe zviyero zvakakomberedza mativi kusimudzira kugadzikana.
Iyo inoratidzira inobvisika, zippered yekupinda uye PE windows kuti ubvumidze yakawanda mweya uye mwenje mukati Iwe unogona kutambanudza iyo inotenderera shutter yekuvhara musuwo weyakavharwa nzvimbo.
Chimiro chakasarudzika chetriangle, ichiita kuti denga repamusoro riwedzere kugadzikana & kusimba. Icho chisarudzo chakanaka chebato rako uye zviitiko zvekunze zvekunze kwekamuri rayo rakakura.
Iyi tende yakakura yemabiko ine simbi yakakomberedzwa yesimbi yepamusoro simba uye ngura-kuramba. Isu shandisa mabhatani echirimo uye tsoka yesimbi uye hoko izvo zvinoita kuti tende riwedzere kusimba, kuzara uye kusimba. Iwo machena maturu ane akafanorongerwa maburi ekubatanidza tambo ye bungee kuburikidza uye inosimbiswa ne grommets kudzivirira iyo turu kubva pakubvaruka. Tambo dzebungee dziri nyore kupeta nepamaburi uyezve kutenderera matanda esimbi kuti uchengetedze.
Pashure: Inotakurika Mota Canopy Ine Isina Mvura 10'x20 '
Zvadaro: Kufamba-muTunnel Plastiki Greenhouse Zvekurima 3x6m